Pakistan oo ku amartay kooxaha kasoo horjeeda Madaxweyne Tayyip Erdogan inay ka baxaan dalka - iftineducation.com
Pakistan oo ku amartay kooxaha kasoo horjeeda Madaxweyne Tayyip Erdogan inay ka baxaan dalka
iftineducation.com – Dawlada Pakistan ayaa ku amartay macallimiinta Turkishka ee dugsiyada lala xiriiriyay wadaadka Turkish ka ee kasoo horjeeda Madaxweyne Tayyip Erdogan inay ka baxaan dalka, iyada oo dawlada Pakistan ay marti qaadayaan hogaamiyaha Turkiga oo maanta booqanaya dalkaasi.
Macallimiinta iyo qoysaskooda, oo lagu qiyaasay inay dhanyihiin 450 qof, ayaa la siiyey ogeysiis inay saddex maalmood gudahood uga baxaan dalkaasi, sida ay xaqiijiyeen gudiga Dugsiyada PakTurk iyo Kulliyadaha maalintii talaadada.
PakTurk ayaa waxay wax baraan in ka badan 10,000 oo arday oo Pakistan islamarkaana beenisay inay xiriir la leeyihiin wadaadka Fethullah Gulen , ama dhaqdhaqaaqiisa “Hizmet” .
Erdogan ayaa ku eedeeyay Gulen, saaxiibki hore ee siyaasadeed, inuu ka dambeeyay isku day afgambi bishii July , iyada oo Turkey ay hore uga codsatay Pakistan inay xiraan kooxaha dalka ee xiriir la leh Sheekha.
“Dugsiyada International PakTurk iyo Kulliyadaha ayaa si qoto dheer uga welwelsan go’aanka kadiska ah ee dowladda ee ku aadan macallimiinta Turkish, maamulka iyo xubnaha qoyskooda … inay dalka ka baxaan muddo saddex maalmood ah,” ayuu yiri dugsiga.
Gabar Badashay Farxiyo Iskoor oo Iyado Qawan Facebook Live soo gashay Farxiyo Jubaland